Daawo Sawirro : Al-Muxeysani oo isku day dil ka bad baaday.
Saturday June 17, 2017 - 12:30:03 in Wararka by Super Admin
Daaciga u dhashay dalka Sacuudiga ee lagu magacaabo Cabdalla Al-Muxeysani ayaa ka bad baaday isku day lagu doonayay in lagu khaarajiyo.
Sheekh Cabdalla Al-Muxeysani oo ka tirsan Guddiga Sharciga ee Hey'adda Taxriiru Shaam ayaa Muuqaal uu iska soo duubay weerarka kadib, waxa uu ku sheegay in Nin Bam isku soo xirayay oo lugeynayay oo isku ag qarxiyay gaariga uu saarnaa isaga iyo dhowr nin oo kale.
Warar markii hore soo baxay ayaa waxay sheegeen inuu qaraxa ku dhintay nin lagu magacaabo Khadar Caadil Shaahiin oo gaariga la saarnaa Cabdalla Al-Muxeysani, hase yeeshee warkaas ayaa markii dambe waxba kama jiraan noqday.
Sida laga arkayay Sawirro laga soo gaarigii uu la socday Muxeysani, waxaa muuqata in gaariga uu ahaa mid gaashaaman, iyadoo qaraxa uu waxyeello kooban soo gaarsiiyay Muraayadaha iyo Wejiga ee gaariga, balse aysan wax dhibaato ah soo gaarin isaga iyo ragga kale ee la socday.
illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda isku dayga dil ee lagu doonayay in lagu khaarajiyo Sheekh Cabdalla Al-Muxeysani, hase yeeshee magaalada Idlib waxaa inta badan ka dhaca weerarro isugu jira dilal iyo qaraxyo, kuwaas oo ay geystaan kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garaneyn.
Wadaadkan isku dayga dil ka badbaaday ayaa safka hore uga jiray liis culimo ah oo isbuucii lasoo dhaafay ay dowladda Sacuudiga ku tiimbaraysay waxa loogu yeero Argagaxisada.